Gooni isu taagga Ingiriiska ee Brexit saameyn ma ku yeelan doontaa Horyaalka Ingiriiska ee Premier League? – Gool FM
(London) 16 Feb 2019. Iyadoo 29 bisha soo socota ee Maarso uu Ingiriisku qorshaynayo in uu si rasmi ah uga baxo Midowga Yurub ee EU oo ay ku mideysan yihiin haatan 28 waddan oo Qaaradda Yurub ah ayaa waxaa la is weydiiyay haddii Ingiriiska ay u suuro gasho inuu EU ka baxo arrintaasi saameyn ma ku yeelan doontaa horyaalka Premier League?.
Wargeyska ‘The Guardian’ oo ka mid ah jaraa’idyada ugu caansan Ingiriiska ayaa ka faallooday saameynta gooni isu taagga Ingiriisku ay ku yeelan karto kubadda cagta Ingiriiska, gaar ahaan EPL.
Warbixinta wargeysku waxay tilmaantay in ka bixitaanka Ingiriiska ee EU ay saameyn ku yeelanayso kubadda Ingiriiska oo Horyaalka Premier League uu ka mid yahay tartammada ugu waaweyn Yurub, isla markaana soo saara ciyaartooy fara badan oo xirfadda kubadda cagta ku dheereeya.
Mar sii horreysay ayaa xiriirka kubadda cagta Ingiriisku waxa uu soo bandhigay qorshe lagu dhimayo ciyaartoyda ajaanibta ah ee horyaalka Ingiriiska ka ciyaarta oo la gaarsiinayo 12 laacib kooxdiiba, halka haatan koox walba loo ogol yahay 17 ciyaartooy oo ajnabi ah.
Kooxaha Ingiriiska ayaa iyaguna weli doonaya in la kordhiyo xiddigaha aan dalkaasi u dhalan ee kooxahooda u ciyaara.
1992-kii ciyaartoyda Ingiriiska ka dheesha 70% waxay ahaayeen kuwo dalkaasi u dhashay, halka maanta 2019 keliya 33% ay yihiin laacibiin ka soo baxday Ingiriiska.
Haatan waxaa jira sharci ah in ciyaartoygii isagoon gaarin da’da 21 sano saddex xilli ciyaareed ka ciyaara Ingiriiska aan loo aqoonsanayn sida laacib ajnabi ah oo dibadda laga soo iibsanayo.
Haddii Ingiriisku ku guuleysto in uu ka baxo Midowga Yurub waxaa ay culeys weyn ku keeni doontaa kubadda cagta dalkaasi, iyadoo adkeyn doonta in ciyaartoyda dibadda ah heshiisyo lala soo galo, halka sidoo kalena taasi ridi doonto qiimihii kubadda cagta Ingiriiska.
Xilli ciyaareedkii 2016/2017 waxaa kooxaha Premier League u soo xarootay 5 bilyan oo Euro.